Maalinta: Meey 13, 2017
Gaadiidka Kocaeli ee gaadiidka 2017 jadwalka xilliga xagaaga ayaa bilaabanaya
Gaadiidka Badda Kocaeli ee 2017 waqtiga jiilaalka ayaa bilaabmaya: Agaasinka Gaadiidka Badda ee Kocaeli Magaalo Weynta Gaadiidka Dadweynaha 2017 jadwalka waqtiga 15 May 2017 wuxuu bilaabanayaa Isniinta. dheeraad ah [More ...]
Mashruuca Mas’uuliyadda Gaadiidka ee Magaalada ee Magaaladda Badbaado: Waxaa hogaaminaya maamulka Samsun, iyadoo la kaashanayo Dawladda Hoose ee Magaaladda metrooga, Agaasinka Gobollada ee Waxbarashada Qaranka iyo Rugta injineerinka farsamada injineeriyada Samsun. [More ...]
Furitaanka Mashruuca Tareenka Nostalgic ee Degmada Sarkoy: Howlaha ay Dowlada Hoose ee Sarkoy iyo Dowlada Hoose ee Magaalada Tekirdag ay si wada jir ah u bilaabeen. Hay'adda Horumarineed ee 'Thrace Development Agency' oo ay taageerto degmada Şarköy ee degmada oo ay taageerto dowladda hoose ee Tekirdağ [More ...]
Xiisaha Weyn ee Karabük ee Mashruuca Tareenka ee La Xaqiijiyay: Kor u qaadida Mashruuca iyo Aqoonta Aqoonta Dheeriga ah ee Aqoon kororsi ee ay qabanqaabisay YOLDER iyada oo loo eegayo mashruuca tababarka xirfadda “Rail Welders waa la caddeeyay oo ay taageerayaan Midowga Yurub [More ...]
20, 05 ee Gudiga kormeerka waaxda kormeerka Gaadiidka, kaas oo loo qabtay in lagu hubiyo hirgelinta wax ku oolka ah ee Barnaamijka Howlgalka Gaadiidka, ayaa lagu qabtay Ankara bishii Mee 2017. Barnaamijka Howlgalka Gaadiidka (UOP), Wadashaqeynta Maaliyadeed ee Kahoreysata (IPA) [More ...]
Xubin cusub oo ka tirsan Ururka Gaadiidka Waddooyinka TCDD Taşımacılık A.Ş: Ururka Gaadiidka Safarka wuxuu sii wadaa inuu sii weynaado kuna xoojiyo xubnahiisa cusub maalinba maalinta ka dambeysa. DTD's 02 ee Bishii Mee 2017 [More ...]
Gaadiidka Helicopter-ka ah iyo Shaqada rakibaadda waxay ka bilaabatay Dhismaha Gawaarida Alanya Cable: Dhismaha gawaarida gawaarida fiilada ayaa bilaabay inay siiyaan gaadiid aad iyo aad u casri badan Alanya Castle, oo ah mid ka mid ah xarumaha dalxiiska ee Alanya. [More ...]
Cabbirka Caalamiga ah ee suugaanta
Dood-cilmiyeed caalami ah oo ku saabsan suugaanta tareenka ayaa bilaabatay: TCDD 3, oo ay taageerayaan Maamulka Degmadda Turgutlu iyo Degmadda Turgutlu, oo ay soo qaban qaabisay Machadka Farsamada. Tababarada Gobolka iyo Jaamacada Celal Bayar. [More ...]
TÜDEMSAŞ Madaxweyne Ku-Xigeenka Bayrakçıl ç Waa inaan ka gudubnaa caqabadaha TÜ
Kuxigeenka madaxa fulinta ee TÜDEMSA Bay Bayrakçıl ız waa inaanu ka hortagno caqabadaha wada jir ah ": Celaleddin Bayrakçıl, gudoomiye kuxigeenka fulinta Celaleddin Bayrakçıl, oo iskugu yimid shaqaalaha naafada ah ee ka shaqeeya T workingDEMSAŞ usbuuca naafada, wuxuu khudbadiisa ku yiri:" Shaqaalaha maamulka shirkada [More ...]
TÜDEMSAŞ waxay booqanaysaa Dugsiyada Sare ee Tokat
TUDEMSAŞ Booqashooyinka Dugsiga Sare ee ka yimid Tokat: Tokat Xirfadaha farsamada iyo farsamada ee Dugsiga Sare ee Birta ardayda iyo macallimiinta ayaa booqday Tüdemsaş ee Sivas. Tokatiga xirfadaha iyo farsamada ee Anatolian High School [More ...]
Xilliyada Shirarka Xawaaladaha iyo Sayniska
Gawaarida iyo Saadka Kongareeska Kongareeska: Gaadiidka iyo Kongareesyada Saadka ayaa ah taxanaha shirarka ee ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen Kuliyadda Iskuxirka Gaadiidka iyo Saadka iyo Saadka. Gaadiidka iyo saadka Qaranka iyo kuwa caalamiga ah [More ...]
TCDD, gaadiidka TCDD iyo Go'aaminta TÜVASAŞ ayaa lagu daabacay wargeyska rasmiga ah
TCDD, Gaadiidka TCDD iyo Go'aannada Ballamada Ballamada TŞVASA Published Waxaa lagu daabacay Gazette Rasmiga ah: Go'aannada ballanka ee TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş. iyo Tüvasa published ayaa lagu daabacay arrinta hadda socota ee Rasmiga Rasmiga ah. Go'aannada waxaa lagu daabacay arrinta hadda rasmiga ah ee Gazette [More ...]
Maanta taariikhda: 13 May 1923 Miinooyinka Bale si ay u qodaan ...